९ दिनमा ७ गुणाले बढ्यो बालबालिकामा संक्र`मण – Sudur Sanchar
९ दिनमा ७ गुणाले बढ्यो बालबालिकामा संक्र`मण
पुष ३०, २०७८ शुक्रबार 45
२९ पुस, काठमाडौं । नेपालमा कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ओ`मिक्रो`नको सं`क्र`मण बढ्दै जाँदा सं`क्र`मित हुने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो ९ दिनको तथ्यांक हेर्ने हो भने संक्र`मित हुने बालबालिकाको संख्या ७ गुणाले वृद्धि भएको छ । २१ पुसमा १० वर्षभन्दा मुनिका ७ जना बालबालिकामा संक्र`मण पुष्टि भएको थियो । तर, २९ पुसमा उक्त संख्या उकालो लाग्दै ४९ पुगेको छ ।
बालबालिकामा संक्र`मणदर बढ्दै जानुमा मुख्य कारण नै खोपको पहुँचमा बालबालिका नहुनु बालरो`ग विशेषज्ञहरु बताउँछन् । उसो त अस्पतालमा को,रोनाका शं`कास्प`द लक्षण भएका बालबालिकाको भर्ना दर बढ्दै गएको छ ।
कान्तिबाल अस्पतालका निर्देशक डा. अजित रायमाझी पछिल्ला केही दिनयता को`रोनाका जस्तै लक्षण लिएर आउने बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको बताउँछन् ।
बालरोग विशेषज्ञहरुको अनुमान छ – ओमिक्रोनको लहरबाट धेरै बालबालिका संक्र`मित हुन सक्छन् ।
हाल कान्तिबाल अस्पतालमा १४ जना शं`कास्पद बालबालिकालाई भर्ना गरिएर राखिएको छ भने दुई जना बालबालिका को`रोना पोजेटिभ छन् । तर, यो संख्या करिब १० दिन अगाडि शं`कास्पद एक दुई जनामा सीमित थियो ।
अस्पतालमा भर्ना भएका शं`स्कापद केसहरु १० वर्षभन्दा तलका बालबालिका छन् । ‘केही दिनयता को`रोनाको ल`क्ष`ण भएका बालबालिका भर्ना हुने क्रम बढ्दो छ,’ डा. रायमाझीले भने, ‘शं`कास्पद बालबालिका थपिँदै जानुले चि`न्ता थपिदिएको छ ।’
डा. रायमाझीका अनुसार १४ वटा शं,कास्पद केसहरुको पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ । बालबालिकाले को`रोना खो`प नपाएका कारण पनि संक्र`मित केसहरु बढिरहेको डा. रायमाझीको बुझाइ छ ।
‘यसभन्दा अगाडिको लहरभन्दा यो लहरमा बालबालिकालाई बढी संक्र`मण गर्नसक्छ । ओ`मिक्रो`न बढी सं`क्रा`मक छ भन्ने कुरा अनुसन्धानले देखाइसकेको छ । त्यसमाथि हामीले १२ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई को`रोना खोप दिन सकेका छैनौं,’ डा. रायमाझीले भने ।
बालरो`ग प्र`तिरो`ध तथा बाथजन्य रो`ग विशेषज्ञ डा. धर्मागत भट्टराई ओ`मिक्रोन बढी संक्रा`मक रहेका कारण बालबालिकालाई जोगाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
‘अन्य भेरियन्टभन्दा ओ`मिक्रोन बढी संक्रामक रहेका कारण धेरै बालबालिकामा संक्र`मण पुष्टि हुनसक्छ,’ डा. भट्टराईले भने, ‘ तर, अहिलेसम्म अध्ययनले धेरै गम्भीर बनाएको देखाएको छैन ।’
बालबालिकामा यसको ल´क्ष`ण कसरी चिन्ने ?
सरकारले बालबालिकाहरूलाई संक्र`मणबाट जोगाउनका लागि विद्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, घरमा पनि अभिभावकले बालबालिकालाई संक्र`मणबाट जोगाउनका लागि जनस्वास्थ्यको मापद`ण्ड पालना गनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
संक्र`मणबाट बालबालिकालाई बचाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका अभिभावकको हुने भन्दै डा. भट्टराई अभिभावकले विशेष सतर्कता अप`नाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
बालबालिकामा रुघाखोकी, श्वास लिँदा आवाज आउने, खानामा रुची घट्ने,
सामान्य ज्वरो जस्ता लक्ष`ण लिएर अस्पताल पुगेका छन् । तर, यी सामान्य लक्षण हुन् । अहिले बालबालिकामा माथिल्लो श्वासप्रश्वास प्रणाली नाक, घाँटी लगायतका अंगमा इन्फेक्सन भएकाहरुमा संक्र`मण देखिएको डा. भट्टराई बताउँछन् ।
बच्चाले राम्रोसँग खाइरहेको छैन, श्वास छिटोछिटो फेर्ने गरेको छ, खेल्न मन गरेको छैन, खोकी वा ज्वरो छ भने चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्ने र बेलैमा परीक्षण गर्नुपर्ने डा. भट्टराईको सुझाव छ ।
श्वासप्रश्वासको गति छिट्टो हुने, कोखा हान्ने, बालबालिका शिथिल हुने, अक्सिजन लेबल ९३ भन्दा तल झर्ने, जिब्रोको भाग निलो हुने जस्ता लक्ष`ण देखिए तुरुन्तै अस्पताल लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । बेलैमा अवस्था थाहा पाए उपचार गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । अन्लाईन खबर बाट
Prevबन त’स्कर भनेपछि… आलेले योगेश भट्टराईको अर्को का-ण्डमा हात हाले
Nextघरमा आएका पाहुनालाई ब’न्च’रोले हानेर ह’त्या
गोंगबुबाट सेनाका हवल्दार सहित चार जना पक्रा’उ, कारण थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुन्छ !
काभ्रे एमालेमा गोकुल बास्कोटा पक्षको लजास्पद हार ,यस्तो आयो नतिजा !
एस एल सी फे,ल भएर बिनोद दुबई गए ,१ सय ६५ तले बुर्ज खालिफामा काम गरेर ‘ईञ्जिनियर’ बने